प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संविधान विपरितः डा. शेखर कोइराला
विराटनगर, ५ पुस-नेपाली कांग्रेसका सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक ‘कू’ गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आज विहान संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गरेपछि डाक्टर कोइरालाले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक ‘कू’ गरेको बताएका हुन् । डाक्टर कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम गरेको समेत बताए।
विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दैै डा. कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध काँग्रेस सडक संघर्षमा आउने बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संवैधानिक ‘कु’ हो र यस विरुद्ध नेपाली काग्रेंसले संघर्ष गर्छ ।’ उनले भने । डा. कोइरालाले संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीबाट भएको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिको कमद पछि काँग्रेसले भावी रणनीति तय गर्ने बताए ।
डा.कोइरालाले लोकतान्त्रिक संविधानमाथिको प्रहार विरुद्ध तत्काल सडकबाट प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी शासकको अभ्यासमा जानकै लागि असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै उनले यसलाई नरोक्ने हो भने संकटकाललगायत जुनसुकै हर्कत गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले संसद विघटनको सिफारिसका सन्दर्भमा सत्तारुढ दलका नेताहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, संविधानविद्, कानूनविद् सबैसँग छलफल गर्न र असंवैधानिक कदमलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रहसमेत गरे ।
बालुवाटारमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो
संसद् विघटनको सिफारिस फिर्ता गर्न नमिल्ने राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको दावी